समाज Archives - Page 72 of 75 - न्यूज सञ्जाल
टि भ्यालीलाई बिर्तामोड थ्री बाई थ्री बास्केटबल उपाधि
ज्येष्ठदेखि किसानसम्म एउटै मञ्चमा सम्मानित
घरेलु मैदानमै म्यानचेस्टर युनाइटेड पराजित
मेस्सी अझै टिम बाहिर !
सन्दकपुर जोड्ने सडकमा बन्यो पुल
सूचीकरण नहुँदा चिराइतोको निकासी ठप्प
सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा खानेपानीसँगै विद्यार्थीलाई स्वेटर
न्यूज सञ्जाल ८ माघ २०७५, मंगलवार ०६:०७
भद्रपुर । निम्नवर्गीय अभिभावकका छोराछारी अध्ययन गरिरहेका भद्रपुर ७ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । अहिलेसम्म परम्परागत ट्युवेलको पानी पिउन बाध्य विद्यार्थीहरुले सोमबारदेखि प्रशोधित खानेपानीको सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । भद्रपुर नगरपालिका, वडा नं ७ ...
न्यूज सञ्जाल ७ माघ २०७५, सोमबार ०६:४३
अर्जुनधारा। नेपाल रेडक्रस सोसाईटी अर्जुनधारा उपशाखा र युवा रेडक्रस सर्कल शनिश्चरे बहुमुखी क्याम्पस इकाई समितिको संयुक्त आयोजनामा सोमबार सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उपशाखाका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद भट्टराई र समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौड्यालको संयुक्त नेतृत्वमा क्याम्पस परिसर सरसफाई गरिएको कार्यक्रममा ...
घुस लिएको आरोपमा वडा सचिव पक्राउ
न्यूज सञ्जाल ७ माघ २०७५, सोमबार ०५:३२
झापा । घुस रकम लिएको आरोपमा झापाको मेचीनगर–२ का स्थानीयले वडासचिवलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । वडा सचिव सुरेश घिमिरेले नागरिताको सिफारिस बनाउन स्थानीय सञ्चली तामाङसँग ९ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा स्थानीयबासीले कारबाहीको माग गर्दै उनलाई प्रहरीको जिम्मा ...
बिर्तामोडमा ‘प्रेमिल’को चर्चा
न्यूज सञ्जाल ७ माघ २०७५, सोमबार ०५:२३
झापा । लेट्स रन नेपाल र लेखक भगवती ढुंगेलको संयुक्त आयोजनामा बिर्तामोडमा साहित्यकार तथा लेखक भगवती ढुंगेलको दोस्रो कृति ‘प्रेमिल’को चर्चा तथा साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उपन्यास ‘प्रेमिल’को चर्चासँगै कवि नवराज पराजुलीले कवितासमेत वाचन गरेका थिए । ...
दुई महिलामाथि आक्रमण गरी आफैँ सेरिए पौडेल ?
न्यूज सञ्जाल ५ माघ २०७५, शनिबार ०६:५९
अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका १० चुथाइमा शनिबार बिहानै एक युवक विभत्स अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । दुई महिला घाइते छन् । चुथाइस्थित एक पैनीमा स्थानीय ४४ वर्षीय षडानन्द पौडेल मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनको घाँटीमा धारिलो ...
इलाम – बिर्तामोड फास्ट ट्रयाक बन्दै
न्यूज सञ्जाल ५ माघ २०७५, शनिबार ०६:४१
बिर्तामोड । मेची राजमार्गको विकल्पका रूपमा इलाम सदरमुकाम–बिर्तामोड फास्ट ट्र्याक खुलेपछि इलामबासी हर्षित छन् । अहिले मेची राजमार्ग भएर बिर्तामोड पुग्नेभन्दा आधा दूरीमै त्यहाँ पुग्न सकिने भएपछि इलामको पर्यटन, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । अहिले मेची राजमार्ग ...
अर्जुनधारा जेसीजको अध्यक्षमा टीआर गौतम
न्यूज सञ्जाल २८ पुष २०७५, शनिबार ०२:५२
अर्जुनधारा । अर्जुनधारा जेसीजको शुक्रबार राति अबेरसम्म भएको अधिवेशनले वर्ष २०१९ को अध्यक्ष पदमा टीकाराम गौतमलाई निर्वाचित गरेको छ । वर्ष ०१९ लाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष गौतमसँगै कार्यकारी उपाध्यक्षद्वयमा जीवन खनाल, रोवक थापा, उपाध्यक्षहरुमा बसन्त बुढाथोकी, सुमन राई, विमला भट्टराई, भीमबहादुर ...
अमित खम्बू अर्जुनधारा। झापाको अर्जुनधारा–१मा हाल निर्माण कार्य भइरहेको हलुवागढ–कालिखोला पर्यापर्यटन सिमसार क्षेत्रको निरन्तरताको लागि सम्बन्धित निकायसँगै सरोकारवालाहरुले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सिमसार क्षेत्र दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका लागि स्वस्थ्य सिमसार भन्ने उद्धेश्यले स्थानीय हलुवागढ सामुदायिक वन उपभोक्ता ...
अर्जुनधारा जेसीजको ७औं सभा सम्पन्न
न्यूज सञ्जाल २७ पुष २०७५, शुक्रबार १२:२६
अर्जुनधारा । अर्जुनधारा जेसीज शनिश्चरेको ७औं साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । जेसीजका अध्यक्ष अजय देवको अध्यक्षता र अर्जुनधारा–७का वडाध्यक्ष नवराम ढुंगाना “नविन”को प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सभामा स्वागत मन्तव्य कार्यकारी उपाध्यक्ष टीआर गौतमले गरेका थिए । सभामा जेसीजले वर्ष २०१८मा ...
यसवर्ष नेपथ्यको पहिलो कार्यक्रम फिदिममा
न्यूज सञ्जाल २६ पुष २०७५, बिहीबार १३:५१
काठमाडौं । नेपालको चर्चित सांगीतिक व्याण्ड नेपथ्यले सन् २०१९ को पहिलो कार्यक्रम पूर्वबाट गर्ने भएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ‘नेपाल यात्रा’ सम्पन्न गरेपछि नेपथ्य फेरि पूर्वतिरै जाने भएको हो । नेपथ्यले माघे संक्रान्तिको भोलिपल्ट पाँचथरको फिदिममा प्रस्तुति दिँदैछ । माघ २ ...
८ भाद्र २०७६, आईतवार १९:२६
८ भाद्र २०७६, आईतवार १९:०३
८ भाद्र २०७६, आईतवार १८:३०
८ भाद्र २०७६, आईतवार १०:१७